ဥရောပကော်မရှင်က ရခိုင်ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ် ဆွေးနွေး | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ဥရောပကော်မရှင်က ရခိုင်ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ် ဆွေးနွေး
ဥရောပကော်မရှင်က ရခိုင်ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ် ဆွေးနွေး
အစိုးရနဲ့ ဥရောပကော်မရှင်တို့ တွေ့ဆုံပြီး ရခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ UEHRD စီမံကိန်းများ အတွက် အလှူငွေနဲ့ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်များကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်က လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနဲ့ ဥရောပကော်မရှင်မှသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kristian Schmidt တို့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပဋိပက္ခဒဏ်ခံပြည်သူ များအတွက် ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ လူသား ချင်းစာနာကူညီမှု တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရေးနဲ့ ဒုက္ခသည်များပြန်လည် လက်ခံရေး၊ စနစ်တကျ ပြန်လည်နေ ရာချထားရေး၊ နောင်မှာ ပဋိပက္ခများထပ်မံမဖြစ်ပွားရေး ကိစ္စများနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ အတိုင်ပင်ခံရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဥရောပကျောမရှငျက ရခိုငျ့ထောကျပံ့ရေး အစီအစဉျ ဆှေးနှေး
အစိုးရနဲ့ ဥရောပကျောမရှငျတို့ တှဆေုံ့ပွီး ရခိုငျဖှံ့ဖွိုးရေးကျောမတီ UEHRD စီမံကိနျးမြား အတှကျ အလှူငှနေဲ့ထောကျပံ့ရေး အစီအစဉျမြားကို တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ကွပါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၂၆ ရကျက လူမှုဝနျထမျး၊ ကယျဆယျရေးနှငျ့ပွနျလညျနရောခထြားရေး ဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေးနဲ့ ဥရောပကျောမရှငျမှသံအမတျကွီး H.E. Mr. Kristian Schmidt တို့ နပွေညျတျောမှာ တှဆေုံ့ ဆှေးနှေးခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ပဋိပက်ခဒဏျခံပွညျသူ မြားအတှကျ ပညာရေးနဲ့ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှုလုပျငနျးမြား၊ လူသား ခငျြးစာနာကူညီမှု တိုးမွှငျ့ပေးနိုငျရေးနဲ့ ဒုက်ခသညျမြားပွနျလညျ လကျခံရေး၊ စနဈတကြ ပွနျလညျနေ ရာခထြားရေး၊ နောငျမှာ ပဋိပက်ခမြားထပျမံမဖွဈပှားရေး ကိစ်စမြားနဲ့ စပျလဉျြးပွီး ဆှေးနှေးကွတယျလို့ အတိုငျပငျခံရုံးက သတငျးထုတျပွနျပါတယျ။
Previous articleဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ ငွေစက္ကူတွေ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေဖို့အဆို လွှတ်တော်လက်ခံ ဆွေးနွေးမယ်
Next articleမောင်သာနိုး၊ သိန်းသန်းထွန်း နဲ့ ညိုထွန်းတို့ တသက်တာ စာပေဆုရ